रिर्पोटरको डाएरी : जुन सरले छोरी जस्तैै भनेर बोलाए, खेलौना जस्तै बनाए….! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण ५, शनिबार १०:१२	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ साउन५ । आज विहानै विस्तरामा चार पाँच कल फोन आयो । साँच्ची भन्नु पर्दा एउटा रिर्पोटरको निजी जिन्दगी नै छैन जस्तो लाग्छ । आफ्नो कार्यकर्ताले एउटी युवतीलाई गरेको भनिएको यौन हिंसाको समाचार वाहिर आएको भन्दै एक जना विद्यार्थी नेताले फोन र सामाजिक सञ्जालमा कान कपाल खाई रहेको तनावका विच राति अवेर निद्रा परेको थियो ।
मलाई माथी बोलाउनु भयो । म गएर बसें । उहाँले माया प्रेमका कुरा गर्नु भयो । तिमी संग घुम्न जान मन छ । असाध्धै माया लाग्छ , विहे गर्न मन छ भन्नु भयो । दुई पटक सम्म मेरो शरीरमा हात लगाउनु भयो । म भागेर बचेकी हुँ । ’
एक मात्र होईन , वहुपत्नीत्वका धनी ती सरलाई अहिले हामी सजग मात्रै गराउन चाहेर नाम विवरण गोप्य राखेका हौं । भन्न चाहन्छौं–तपाईलाई के कमी छ ? छोरा वुहारी नाति नातिना भई सकेका तपाई मान्छेलाई त्यो बुढेशकालमा आएर आफैले पढाउने १८ वर्षिया ठिटी चाहियो ?
त्यहाँका जिम्मेवार जनप्रतिनिधीहरुले तपाई प्रति दया गरेरै नाम विवरण गोप्य राखी दिन अनुरोध गरेका छन । तपाईका छोरीहरु भन्दा पनि कान्छी हुन् ती दलित समुदायकी तपाईले जिस्काउने विद्यार्थी ।
पेन्सन निक्लन ठिक्क परेको मान्छे हो तपाई । यस्तो बेलामा हामीले नाम विवरण राखी दियो भने हालत के होला ? परिणाम सोच्नु भएको छ ? सुनिन्छ हामी कहाँ तपाईले ती विद्यार्थी माथी गरेको हर्कतको सुचना आई सक्यो भन्ने थाह पाउन साथ तपाई विक्षीप्त हुनु भएको छ’रे ।
वलात्कार उद्योग आयो जिल्लामा
तिन दिन अघि गुल्मी कै हुँगाका एक जना वासीन्दाले फोन गरे । उनले भने–‘ एउटी वोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थितीकी महिलालाई त्यहाँको एक जनाले घर भित्रै पसेर समात्यो । उसले वलात्कार गरेको हामीलाई आशंका छ । ती गरिव परिवारका हुन । उनका वावु र दाजु भाईलाई एक वोत्तल रक्सीमा विकाएर गाउँमै गापचुप पारिदै छ । ’
ती ब्यक्तिले त्यसरी सुचित गरी सकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र खड्का संग कुराकानी गरियो । खड्काले तत्काल स्थानिय तहमा बुझे पछि हिजो ती आरोपीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर भई म्याद थप समेत गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस कार्यालय मुद्दाफाँट प्रमुख सत्यनारायण यादवका अनुसार छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्वर १, हुँगाका ४४ वर्षिया जयबहादुर कामीले छिमेकी सुस्त मनस्थितीकी महिलाको घरमा पसेर संवेदनशील अंगमा हात लगाएको उनका वावुले देखे पछि यो कुरा वाहिर आएको हो ।
साउने सक्रान्तिका दिन अविरल वर्षा भई रहेको बेला मदिराले मस्त भएका उनि त्यस घरमा पसेर सुस्त मनस्थितीकी ती महिलालाई वलात्कार उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ताको प्रकृया अगाडी बढाईएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए ।
उनलाई यो पनि अवगत गराउन चाहन्छौं कि अहिले प्रहरी प्रशासनमा भन्दा पहिला सञ्चार माध्यममा पीडितले गुहार माग्न थालेका छन । यदि त्यसो नगर्ने भएको भए । एक वोत्तल रक्सीमा गाउँमै मिलाउन थालिएको पछिल्लो यो वलात्कार उद्योग मुद्दा पनि जिल्लामा यसरी आउने थिएन ।
ती कार्यकर्ताका निकट युवक थिएर उनले ती रगतको पोखरीमा डुवेकी युवतीको पीडा उठान गलत ठाने तर उनि आफ्नै वहिनी हुन्थिन भने के गर्थे ? समाचारमा आफ्नो विरानो हुन्न भन्ने उनले सम्झीदिए पुग्छ ।